Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Xanduva » I-CEO yokulala eLondon: Ukutshintsha uBomi kwiNbanda ekrakra
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
UHenrik Muehle, uMphathi Jikelele weFlemings Hotel eLondon Mayfair, kwiCEO Sleepout
“Ngobubusuku bubusuku bam,” watsho uHenrik Muehle, uMphathi Jikelele weFlemings Hotel eLondon Mayfair. “Ndipakishe ibhegi yam yokulala yaye ndiza kunxiba iimpahla ezininzi ezishushu ukuze ndilale phandle kubusuku obuqhaqhazelis’ amazinyo kumaBala eQakamba eNkosi eSt. Johns Wood Road, eLondon, ukuze ndibonise umanyano kubantu abasweleyo.”
U-Bianca Robinson osuka kwi-Lords Cricket Ground uthe: “Bekunzima kuthi ukuvala i-Lockdown kuthi sonke. Kodwa khawufane ucinge ukuba ubungenakhaya, ungenamandlalo, ungenakutya, yaye akukho ndawo uziva ukhuselekile kuyo.
“Le ngxaki iqhubele abantu abaninzi ezitalatweni njengoko bephelelwe ngumsebenzi, bengakwazi ukuhlawula irente, besokola ukondla iintsapho zabo. Abanye bakwazile ukusebenzisa amagumbi ehotele angenanto, kodwa ngaphandle kwenkxaso eqhubekayo, baya kubuyela ezitratweni. Badinga uncedo LAKHO. Uya kulala phantsi nabanini bamashishini, abagwebi, kunye neengcali eziphezulu, kunye neenkokeli zazo zonke iintlobo, zonke zizama izinto ezilala ngaphandle ukwazisa kunye nemali, umntu ngamnye ethembisa ukunyusa okanye ukunikela ubuncinane be-£ 2,000 ukulwa nokungabi namakhaya kunye nentlupheko. eLondon. Ubusuku bakho bokulala ecaleni koontanga bakho eNkosi bungatshintsha ubomi.”
I-CEO Lala Ngaphandle malunga nabathathi-nxaxheba be-100 yenzeka emva kokuba ihlehlisiwe ukusuka kwi-2020. Ngo-2019, abantu abalalayo banqanda ingqele kwaye baphakamisa i-£ 85,000 emangalisayo yesisa sasekhaya.
uHenrik Muehle kunye noHillary Clinton
UHenrik Muehle ngomnye wabaxhasi abakhulu bengxowa-mali ye-CEO yokunyusa ingxowa-mali yokulala. Ngeeveki ezimnyama kunyaka ophelileyo xa ubhubhane wabetha eLondon, kwaye iihotele kunye neeresityu, iivenkile zekofu, kunye neebhari kwafuneka zivalwe ixesha elide, wayepheka i-curries (izidlo ezingama-300) ekhitshini lakhe lehotele elinenkedama kubantu abangenamakhaya. Ngokwesiqhelo, unompheki weMichelin Star kwindawo yakhe yokutyela iORMER Mayfair, kodwa ngexesha lokuvalwa, kwakungekho basebenzi, kungekho chef, kwaye kungekho ndwendwe ehotele. Kwafuneka afudukele ehotele kunye nabantu abambalwa ukuze agcine yonke into ihamba kwaye ikhuselekile.
Yayilixesha elibi elishiye abasebenzi abaninzi behotele kunye neendawo zokutyela kulo lonke elaseLondon bengenamsebenzi kunye nengeniso. Uninzi lwabo lwalungaphelelwanga yimisebenzi nje kuphela kodwa namakhaya alo njengoko lwalungasenakukwazi ukuhlawula irente kwaza kwafuneka balale nzima. Abemi be-EU abakwazanga ukubuyela kumazwe abo njengoko bekungekho naziphi na iinqwelomoya okanye inkonzo kaloliwe ebuyela kwilizwekazi.
Xa wayehamba imigama emide kwizitrato zaseLondon ezingenabantu, uHenrik Muehle wafumanisa iindawo zokugcina ukutya ebusuku waza wagqiba kwelokuba ancede ngoko nangoko. Uninzi lwabasebenzi bakhe bangaphambili bakuvuyela ukumxhasa. Umanyano olukhulu ngokunika ukutya kunye neziselo ezishushu kwibhanki yokutya ekufutshane neTrafalgar Square yayimangalisa nje. UHenrik uphinde waququzelela iingxowa zokutya ezivela kwi-M&S ukulungiselela abo basweleyo.
Ufanelwe yimbasa, utshilo uFrances Smith waseLondon. Ndivuma ngokupheleleyo kwaye masithembe ukuba akukho mntu ungenwa yingqele emva kokulala phandle emoyeni obandayo kumabala eqakamba eNkosi.
Kutheni le nto ibaluleke kangaka?
The iphupha elibi lokungabi namakhaya ijongene nabantu abangama-250,000 abathi yonke imihla e-UK. Uphononongo lwakutsha nje lubonisa inyaniso eyothusayo malunga nokungabi namakhaya eNgilani.
Eyasungulwa ngo-2015 nguSihlalo u-Andy Preston, i-CEO yeziganeko zokulala ziye zabanjwa kulo lonke elase-UK, kubandakanywa iziganeko ze-8 zokulala eziza kulo nyaka. I-Sleepout ibibanjelwe eLord's Cricket Ground kumntla-ntshona weLondon, kwaye iinkokeli zoshishino zilale ngaphandle kobunye ubusuku obubandayo kulo nyaka ngeenzame zokunyusa imali nokwazisa ngentlupheko eyandayo e-UK.
“Umoya wobusuku wawumnandi, kwaye ngaphandle kwengqele, ukwazi ukuba sinceda abantu kulo mmandla wenze imvakalelo eshushu ngokwenene,” utshilo umthathi-nxaxheba.
Yintoni esiyaziyo malunga nokulala rough eLondon?
Abantu abayi-11,018 barekhodwa njengabalala kakubi kwikomkhulu ngo-2020/21. Le datha, evela kwi-Greater London Authority's, ilandelela abantu abangalali kakuhle e-London ababonwa ngabasebenzi bokufikelela. Oku kukunyuka nge-3% xa kuthelekiswa netotali yabantu abayi-10,726 ababonwa kunyaka ongaphambili kwaye phantse kabini kwiminyaka eyi-10 eyadlulayo. Ngaphakathi kwe-11,018 iyonke, i-7,531 yayingabantu abatsha abalalayo abangazange babonwe belele eLondon ngaphambi kwalo nyaka.
Isibalo sokulala esirhabaxa simele incam yomkhenkce. Abo bahlala kwiishelter nakwiihostele abaqukwanga. Ibe ingengabo abantu abalala ezibhasini zasebusuku, abangabonwayo, okanye bahamba besuka kwenye ibhedi besiya kwenye, itsho njalo iGlassdoor.